မြန်မာကို ကူညီဖို့ IMF ရုံးဖွင့်
တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် နံနက် ၆း၀၀-၆း၃၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် နံနက် ၆း၃၀-၇း၀၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် ညနေ ၆း၃၀-၇း၀၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် ည ၉း၀၀-၁၀း၀၀ နံနက် ၆း၀၀-၆း၃၀နံနက် ၆း၃၀-၇း၀၀ညနေ ၆း၃၀-၇း၀၀ညပိုင်း ၉း၀၀-၁၀း၀၀ ယခင်အစီအစဉ်ဟောင်းများပေါ့ဒ်ကတ်စ်မိုဘိုင်းလ် ဗွီအိုအေမြန်မာ - YouTube နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာအပတ်စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာဗွီဒီယိုသတင်း ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး သတင်းများ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ IMF ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု နည်းစနစ် အထောက် အပံ့တွေ မြန်မာနိုင်ငံကို ပေးနိုင်ဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရုံးဖွင့်မယ်လို့ IMF က ကြေညာပါတယ်။
IMF အဖွဲ့က စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးနဲ့ လေ့ကျင့် သင်တန်းတွေပေးရေးဘက်ကိုလည်း အာရုံစိုက် လုပ်မှာ ဖြစ်တာနဲ့ အတူ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ Laos နိုင်ငံတွေအတွက် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ဖို့ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ရုံးခန်းဖွင့်မယ်ဆိုတာကို IMF ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုး Christine Lagarde က ကြာသပတေးနေ့က အသိပေးပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံက Bank of Thailand မူဝါဒရေးရာ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပြောခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းထဲမှာ IMF အကြီးအကဲ က ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနဲ့ လာအိုနိုင်ငံဆိုင်ရာ IMF ရုံးကို ဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ Bank of Thailand ရုံးမှာ အခြေစိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးခန်း ဘယ်တော့ စတင်ဖွင့်မလဲ ဆိုတာကိုတော့ မပြောခဲ့ပေမဲ့ အာရှ နှစ်နိုင်ငံအပေါ် ပေးနေတဲ့ အထောက်အပံ့တွေကို ပိုပြီးခိုင်ခိုင်မာမာ ပေးချင်တယ်လို့ IMF က ပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ တက်လာခဲ့ပြီးနောက်မှာ နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းကို တပြေးညီ သတ်မှတ်နိုင်ရေးမှာ အကူအညီပေးဖို့ မြန်မာ အစိုးရက IMF ကို အကူအညီတောင်းခံခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် October လကစလို့ IMF က မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက် လေ့လာပြီး လိုအပ်တဲ့ အကြံပြုမှုတွေကို ပေးခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့ IMF အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက အကြွေးပြန်ပေးဖို့ ပျက်ကွက်တဲ့အတွက် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှောင်းပိုင်း နှစ်တွေကတည်းက IMF က မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
This forum has been closed. Comments There are no comments in this forum. Be first and add one နေ့စဉ်တီဗွီသတင်းလွှာ (၁၀-၂၃-၂၀၁၄)
နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာ (၁၀-၂၃-၂၀၁၄)i
360p / 89.0MB
480p / 143.0MB
အကြမ်းဖက် ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို ငုံ့ခံမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကနေဒါ ၀န်ကြီးချုပ်က ပြောဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်း၊ အမေရိကန် ဦးဆောင်တဲ့ လေကြောင်းထိုးစစ်တွေကြောင့် စစ်သွေးကြွတွေ ရာနဲ့ချီ သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ လှုပ်ရှားသူတွေက ပြောဆိုတဲ့အကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လူသတ်မှုနဲ့ စွပ်စွဲခံနေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ ယောက်ကို...
အကြမ်းဖက် ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို ငုံ့ခံမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကနေဒါ ၀န်ကြီးချုပ်က ပြောဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်း၊ အမေရိကန် ဦးဆောင်တဲ့ လေကြောင်းထိုးစစ်တွေကြောင့် စစ်သွေးကြွတွေ ရာနဲ့ချီ သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ လှုပ်ရှားသူတွေက ပြောဆိုတဲ့အကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လူသတ်မှုနဲ့ စွပ်စွဲခံနေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ ယောက်ကို စစ်ဆေးရာမှာ နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းတဲ့ လက္ခဏာတွေ တွေ့ရတယ်လို့ ထိုင်းလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်က ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်း စသဖြင့် …. ထိပ်တန်းသတင်းများ ကနေဒါ သေနတ်သမား တကိုယ်တော် လှုပ်ရှားခဲ့ အင်ဒို သမ္မတသစ်ရဲ့ သမီး အခွင့်ထူးခံဖို့ ငြင်းပယ် မြောက်ကိုရီးယား ICC တင်မယ့်အရေး တရုတ် မထောက်ခံ စစ်ရေး အပြုအမူ ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အလားအလာ ထိခိုက်နိုင် ကင်ဆာကု ဗိုင်းရပ်စ် တရုတ်စမ်းသပ် မြန်မာ့ပညာရေးပြောင်းလဲဖို့ မျက်နှာဖုံးစွပ်လူငယ်တွေ ဆက်ဆန္ဒပြမည် အများဆုံးဖတ်ရှုသည့် သတင်းများ အင်ဒို သမ္မတသစ်ရဲ့ သမီး အခွင့်ထူးခံဖို့ ငြင်းပယ် စစ်ရေး အပြုအမူ ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အလားအလာ ထိခိုက်နိုင် မြောက်ကိုရီးယား ICC တင်မယ့်အရေး တရုတ် မထောက်ခံ ကနေဒါ သေနတ်သမား တကိုယ်တော် လှုပ်ရှားခဲ့ ကင်ဆာကု ဗိုင်းရပ်စ် တရုတ်စမ်းသပ်အများဆုံးအီးမေးပို့သည့် သတင်းများNo itemsအများဆုံးကြည့်ရှုသည့် ဗွီဒီယိုသတင်းများJean-Claude Duvalier Mande Padon ak Rekonsilyasyon Nan Peyi Dayiti နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာ (၁၀-၂၃-၂၀၁၄) ကမ္ဘာ့သတင်း စက္ကန့် ၆၀ ကနေဒါ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု စစ်သွေးကြွအန္တရာယ်နဲ့ ဒုက္ခသည်ပြဿနာ